Matongerwo eNyika, 01 Gunyana 2016
Gunyana 01, 2016
Zuva Rinomboora kweMaminetsi Gumi muZimbabwe neDzimwe Nyika
Nemusi weChishanu zuva rakamboti woreyi zvishoma kana kuti eclipse zvakaonekwa muZimbabwe nedzimwe nyika dzekuchamhembe kweAfrica dzinoti Tanzania neReunion island.
MuHarare Dare Rinoti Muchuchusi Akazvidza Dare, KuBulawayo Mutori weNhau Akarohwa neMapurisa Pakuratidzira Achiendeswa kuChipatara
Kunzwikwa kwechikumbiro chechikwata chevanhu makumi matanhatu nevasere kusanganisa mutori wenhau James Jemwa vakasungwa pakuratidzira kwakaitika muHarare svondo rapera kwakaenderera mberi neChishanu mutongi wedare achiti hurumende yazvidza dare mukunzwikwa kwechikumbiro ichi.
Hurumende Yopinza Vamwe Varairidzi Mabasa
Hurumende iyo yanga yakambomisa kupinza vanhu mabasa ichiti vashandi vayo vakawandisa yatanga kutora vadzidzisi vemuzvikoro zvepasi.
Hurumende Yodzika Mutemo weKurambidza Vanhu Kuratidzira kweMavhiki Maviri
Hofisi yemuchuchusi mukuru wehurumende nemusi weChina yakadzika mutongo wekuti vanhu vambomira kuratidzira kwemavhiki maviri kana kuti Prohibition Order ichiti zvinhu hazvina kumira zvakanaka munyika.
Vamwe Voshoropdza SADC neKukundikana Kwayo Kuzeya Nyaya yeZimbabwe
Musangano wechimakumi matatu nenhanhatu weSADC Summit wevatungamiri venyika dzemu SADC wemazuva maviri wakapera neChitatu kuSwaziland nyaya yeZimbabwe isina kuzeyiwa kana kukandwa mudariro.
Vanhu Vanomwe Vosungwa kuBulawayo
Kunyange hazvo kwange kuine runyararo vanhu vachiita mabasa avo semazuva ose muBulawayo, mapurisa asunga vamwe vanhu muguta iri mushure mekunge vamwe vechidiki vari pasi pesangano rinonzi Bulawayo Youth Arise, kana kuti BUYA, vada kuratidzira.
Vanhu Vakasungwa Vachiratidzira muHarare Vomiswa Pamberi peDare
Vasungwa makumi matanhatu nevapfumbamwe vanonzi vakakonzeresa mhirizhonga pakuratidzira kwakaitwa svondo rapfuura vamiswa pamberi pedare zvakare nhasi pavaenderera mberi nekusvitsa chikumbiro chekuti vatongwe vachibva kudzimba dzavo.
Mapurisa Ozara muHarare Kudzivirira Vanhu Kuratidzira
Kunyange hazvo zvitoro nemisika yakawanda zvange zvakavhurwa muHarare nemusi we, vange vakaronga kuramwa mabasa vechikwata cheTajamuka/Sesijikile vanoti kuramwa mabasa uku kwabudirira sezvo vanhu vakavhundutsirwa nemapurisa nemusi weChitatu manheru.
VaCharamba Voramba Kutaura nezveKusiyira Panzira Musango weSADC Kwakaitwa naVaMugabe
Mutungamiri wenyika VaRobert Mugabe vanonzi neChipiri vakabva kumusangano weSADC Summit kuSwaziland vachienda kuDubai.
Mufundisi Sabvute Vodudzira Zviri Kuitika Munyika Vachiti Zvakanyorwa Kare muBhaibheri
Hurumende pamwe nevamwe vanoongorora zvematongerwo enyika vanoti vanhu vari kuratidzira ava vari kushandiswa nehurumende dzekumawirira kuti vamukire hurumende yaVaMugabe.
Misoro yeNhau dzedu dzanhasi, Chitatu, Nyamavhuvhu 31, 2016.
Muimbi ane mukurumbira, Thomas Mapfumo, anoti achabatana nevamwe vana veZimbabwe vachanoratidzira mwedzi unouya kuNew York pachatanga musangano weUnited Nations.